बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानकाे सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार, १० जना विरूद्व मुद्वा दायरः सात जना निलम्बनमा::mirmireonline.com
बीपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानकाे सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार, १० जना विरूद्व मुद्वा दायरः सात जना निलम्बनमा
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका सात जना निलम्बनमा परेका छन् । उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियार र भतिज डा. रामहरि रौनियार ८ लाख घूससहित पक्राउ परेपछि अख्तियारले उक्त प्रकरणमा सम्लग्न पूर्वपदाधिकारी, बहालवाला कर्मचारी र मेडिकल सामान उपलब्ध गराउने दुई व्यवसायी गरी १० जना विरूद्व मुद्वा दायर गरेकाे हाे ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेडिकल उपकरण, सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै साे प्रकरणमा संम्लगन व्यक्तिको पनि संलग्नता खुलेको हो। मुद्दा किनारा नलागुन्जेल उनीहरू स्वतः निलम्बनमा पर्ने अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले बताए। ‘कुनै पनि व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि सार्वजनिक पद स्वतः निलम्बन हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत आयोगबाट पत्र गइसकेको छ,’ उनले भने। अख्तियारले प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार गर्ने अरू पनि तानिने सम्भावना रहेको जनाएको छ।
उपकरण तथा सेवाको खरिदमा बोलपत्रसम्बन्धी कागजमा उल्लिखित प्राविधिक विशेषज्ञता र सोही कागजमा संलग्न खरिद सम्झौताका सर्तअनुसार काम गर्नुपर्नेमा उल्लंघन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। खरिदमा न्यून कबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई पन्छाई बढी कबोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत गरी भुक्तानी दिइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। प्रतिष्ठानमा चार वर्षको अवधिमा अख्तियारले दर्जन पटक छापा मारेको थियो। तर हालसम्म कुनै मुद्दाका बारेमा फाइल खोलिएको थिएन। पछिल्लो मुद्दामा कुन–कुन मितिमा आरोपितहरूले सामान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेका हुन् भन्ने खुलेको छैन। प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘प्रतिष्ठानमा भएका अरू भ्रष्टाचारका विषयमा पनि अनुसन्धान हुँदैछ। हाल विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएकाले बयान लिने प्रक्रिया हुँदैछ।